Home Wararka War Deg deg ah : Dawladda FS oo Itoobiya u adeegsatay in...
War Deg deg ah : Dawladda FS oo Itoobiya u adeegsatay in la qafaasho Mukhtaar Roobow iyo Dagaal socda
Deg_Deg Cidamada Ethiopia ayaa hadda bilaabay hawlgalkii ugu horreeyey oo xiray Musharrax Sheekh Muqtaar Robow Kadib Markii weerar ay Ku Soo qaadeen Musharraxa. Ciidamada oo la sheegayo inay si xun u jirdileen waa qaateen Isagoon hadli karin Oo uu miirka Ka tagey lamana oga xaalkiisa hdada waxa uu ku suganyahay Iyo goobta la aadeen.
Waxaa goobta ku sii socda wariyaheenna Baydhabo halkaan kala soco wixii ku soo kordha.
Previous articleWar Deg Deg ah:-Madaxweynaha Eritrea oo hada kasoo degaayo Garoonka aadan Cadde
Next articleCiidamadii Baydhabo la geeyay oo Magaalada Qas ka wado iyo dagaal ka socda+Rooboow oo la!!
Faahfaahin ku saabsan Bajaajle waday haweenay fool aheyd oo Muqdisho lagu...
Wasiir ka tirsan xukuumadda Rooble oo ku eedeeyay Dowladda Musuqmaasuq baahsan